ONYX peturu-ku-propane kutendeuka makiti anotendera kudzikisa mutengo, mweya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » ONYX peturu-ku-propane kutendeuka makiti anotendera kudzikisa mutengo, mweya
Yakachena magetsi tekinoroji innovator ONYX Systems yakazivisa kuwanikwa kwepadhuze zero emission propane shanduko kits yeJohn Deere Gator utility mota, ichibatsira vanoshanda nemutengo wakaderera wemafuta, kuderera kwekupedzisira, uye kuwedzera kugadzirwa.
Iyo EPA & CARB yakasimbiswa kits inokodzera TX uye HPX John Deere Gators akagadzirwa mushure me2015 uye anowanikwa kuisirwa kune vanotora chikamu John Deere vatengesi.
"ONYX propane conversion kits uye propane injini masisitimu zvakapa mazana evagadziri venzvimbo, makoreji, mapaki, nemataundi mhinduro yakavimbika uye yakachena kune avo ekutengesa mowers iyo inoderedza mutengo wekushandisa madhora zviuru zana paawa yekushanda pamushini," akadaro Jeremy Hahne, VP weKutengesa. paONYX.
"Masangano mamwe chete aya anogona kushandura maGator fleets kuti ave ane hushamwari, mutengo wakaderera, uye mafuta akavimbika."
Makiti anowanikwa kuti agadzirwe kuburikidza nevatengesi vanotora chikamu.